tababarka jirka ee qaybta waqtiga-waxbarashada ah antwerp
Waxaad si gaar ah uga welwelsan tahay dibadda gaariga oo aad baraneysid inaad dayactirto waxyeelada fudud ee gaari wadida gaariga.
Waxaad baraneysaa inaad la shaqeysid qalab kala duwan, ballaarinta qaybaha baabuurta iyo isku xirka, alxanka iyo dharka, dhejinta, xoqista iyo xoqista. Waxaad baran doontaa midabada saxda ah waxayna si taxadar leh u buufineysaa jirka.
Diyaargarowga gawaarida shil ka dib imtixaanka, barashada isticmaalka qalabka lagu ogaanayo, ... sidoo kale wuxuu leeyahay aqoontaada.
Intaa waxa dheer, waxaad baran doontaa fiilooyinka, makiinadaha, ammaanka shaqada iyo korontada.
Tababarka Body cusboonaysiiya ka kooban yahay modules 7:
jirka daaweyn dusha
Dismounting / bodywork sii kordhaya
Koolo iyo blaastiigga jirka
jirka biraha Sheet
Buufin Ready jirka samaynta
shaqada jirka Diyaarinta
waxaad leedahay isha si faahfaahsan
Hay'ad tababar ayaa qaadeysa celcelis ahaan labo ilaa shan sano.
Waxaad ku bilowdaa demonteur moduleka.
Iyada oo shahaado ah carrossier Ma hubtaa shaqada?
Haddii aad rabto in aad ku takhasusaan ka dibna aad sii qalmi kartaa sida rinji jilciye.
Carrossiers waa xirfadlayaasha waana sida mid kasta STEMshaqeyntu waxay aad uga welwelsan tahay suuqa shaqada.
Waayo, tababarka bodywork Uma baahnid inaad leedahay aqoon gaar ah oo qarsoodi ah.
Muxuu shaqaale Carrosserie u qalmaa?
Waxaad marwalba joogi kartaa shaqooyinka jirka hagaajinta waxbarashada EDUCAM.